June 9, 2019 marqaan Faallooyinka, Wararka Maanta 6
Khayre oo siyaasiyiin ka soo wada jeeda Dirta Waqooyi u magcaabay guddigga qaban qaabada xuska todobaadka xoriyadda
Raiisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya qaban qaabada munaasabadda xuska todobaadka xoriyadda Soomaaliya.
Guddigan uu magacaabay raiiusl wasaaraha Soomaaliya in ay ka shaqeeyaan qaban qaabada,sanadguuradii 59,aad ee ka soo wareegatay xorriyadda,midnimada iyo dhalashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed,kaasi oo ka kooban 7 xubnod.
Gudoomiyaha Gudigan Waa Dirta Waqooyi
Kan labaad Waa Dirta waqooyi
Kan saddexaas waa Beesha Raxan wen
Kan Afraad waa Hawye
Kan shanaad waa beesha shanaad, Yaxar
Kan lixaad wa Dirta Koonfureed
Kan todibaad waa xerta Leelkasaha ee la shaqaysata SNM iyo USC
halkan ka akhriso magacyada guddiga:
1: Maxamed Cabdi Xayir Maareeye,Wasiirka Warfaafinta Guddoomiye.
2: C/raxmaan ducaale Beyle Wasiirka Maaliyadda Xubin
3: Xasan Cali Maxamed,Wasiirka Gaashaandhigga xubin.
4: Maxamed Abuukar Islow Ducaale Wasiirka Amniga Gudaha Xubin.
5: Khadiijo Maxamed Diiriye Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha xubin.
6: Deeqa Yaasiin Xaji Yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqulinsaanka xubin.
7: Sadiiq Xirsi Warfaa Wasiirka Shaqada iyo Shaqalaaha xubin.
TAARIIKHDA HARTIGA WEEYE IN GUDDI LOO SAARO
Sanad guuradan Soomaaliya xusiddeeda waxaa Hartiga uga muhiimsan in ay marka hore dib u saxaan taariikhdoodii dahabiga ahayd ee sida xun uga qaldantahay waxii ka dambeeyay qaadashadii xorriyaddaas iyada ahi. Qarankii Soomaaliya curashadiisii waxaa Eebbe sokadii u sabab ahaa Daaroodka, gaar ahaan na Hartiga, oo halgan adag u soo maray. Si kasta oo aynu ugu faanayno dowrkeenaas dahabiga ahaa ee aynu xornimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliya ka soo qaadannay ayaa waxaa xusid mudan in isla markaasi uu qalad weyni taariikhdii Hartiyeed kaga habsaday haybsashadii mugga lahayd ee qarannimadaasi. Taasaa hadda baahi degdeg ah u qabta in la saxo.
Sida laga wada dharegsan yahay ba geyiga Hartiyeed imaatinkii gumeysiga hortii ayaa waxaa u sugnaa xadaarad qarniyo dhowr ah soo jirtay oo caalamka kale toos ugu xidhnaa. Taariikhdaas faca weynayd ayaa siraadkeedii inta la bakhtiiyay lagu baddashay faynuustii qarannimada Soomaaliya. Nasiib daro se faynuustaasu iftiinkeedii geyiga Harti ma soo gaarin oo markii dambe ba Isaaq iyo Hawiye ayay belo u soo dirtay. Wax horumar ah ee la taaban mise tabi karo geyiga Harti ka ma uusan dheefin qarankii Soomaaliya, sababo badan aawadooda ee ay ugu weyntahay in mansabkii geyiga Harti u gaarka ahaa Soomaali oo aan dawlad ba aqoonin la iskaga dayacay qarannimada Soomaaliyeed.
Qaladkaas dhacay ayaa sababay ragaadka, talo xumada, hoggaan li’ida, irdhada, jaha wareerka, habaca iyo kala yaaca sanadihii dambe ku habsaday tolweynaha Harti iyo geyigooda oo shimbirkoodii iyo sha’nigoodii hoos uga riday. Qalad lagu ma saxo qaladaad kale oo sidaasi aawadeed ayaanay munaasab ahayn in haddeer ay Hartigu Soomaalida kale isku qabqabsadaan xuska sanad guurada qaadashadii xornimada waayo tiisa daryeele ayaa tu kale na ku darsada. Taariikhda Harti ee faca weyn ee qaldantahay oo dib loo saxo ayaa hadda taagan oo ka sii muhiimsan.
Abdulrazak Fakkad says:
Reerkiina inaad u hadasho miyaa kula habboonaatay adoo jooga qarniga 21aad.
Harti halamash miyay cilaaqaadkii ka goosan dFS mise wayska halamash laba sal u dhexeeye
Guddi loo magcaabay munaasibad cudna wax ku soo kordhin maayo xitaa haddey isku aabbe yihiin, ee danta guud ha laga raaco. Qabiil kastaa dal iyo deegaan buu leeyahay aan cudina ka qaadi karin, dawladdana waxaa loo dhisay in ay dalka iyo dadka u sinnaato haddii kale xilliga doorashada ayey mireeheeda gurin macaan iyo kharaar.
Harti waxan filayaa ninka qoraalka keenay in uusan ogeyn in uu daarood yahay qofkasta xaquuq ayuu leeyahay ka fiiri liiska daarood dabadeed (Harti Hunguri Hantaale)wax ha u raadin ha la xishoodo wiil soori kaa qaaday waa wiil seef kaa qaaday
Waxay ahayd in saami qaybsiga lagu saleeyo Hawiye iyo Dir,
Maxaa wacay Daaroodku kolkii horeba wuxuu ahaa kudar ama farax, wuxuu kudaranyahay oo uu ka mid yahay Dirta,
Sidaasuu hartigu kuqabaa sedkiisii ee ha iimaansado
Iimaan Allaah uur buuxiyee.